Boribory haingam-pandeha haingana sy malefaka birao vita pirinty vita pirinty manamboatra amoron-dranomasina Fividianana sy Factory | Stamgon
Tariby fohy azo antoka azo atao pirinty natao pirinty ho an'ny fehin-kiraro amoron-dranomasina
Laharana modely: SSDKR190807-1
Famaritana: mens beach shorts
Fonosana: kitapo 1pc / Opp
Toerana niaviany: Fujian, Sina
Fahaiza-mamatsy: Saham-bokatra 10000 isam-bolana
☆ Ny valahana mifangaro amin'ny tady matevina sy malefaka vita amin'ny vy matevina ary vy.
☆ kalitao tena tsara: Ny lamba vita amin'ny lamba dia 100% volon'ondry vita amin'ny polyester peach, malefaka ary mifoka rivotra, hahazoana antoka fa hankafizanao azy tanteraka. Fanamarihana: habe tsy tapaka: S, M, L, XL, XXL.
☆ paosy roa sy paosy lehibe iray, mora apetraka ao anatiny.
☆ Ity kiraron'ny tora-pasika ity dia manome fahatsapana manokana anao momba ny fampiononana sy ny fifaliana amin'ny fialan-tsasatra, ny tantely, ny fitsangantsanganana amoron-dranomasina, ny fety amin'ny rano ary ny hetsika maro samihafa amin'ny rano.
Anaran'ny vokatra: Sahan-tsarimihetsika malemilemy maina sy malefaka moramora ny kiraro mens beach
Mens - amoron-dranomasina misy opération OEM ODM
endri-javatra: Manjary lamaody, mifofofofotra, hafa.
Color: Blue, efa mipi, maitso
Lable & Logo Ekena azo ekena
Amin'ny entana stock: 15 andro; OEM / ODM: 30-50 andro aorian'ny fankatoavana santionany.
Stamgon dia orinasa indostrian-damaody izay manampahaizana manokana amin'ny fanomezana kiraro isan-karazany ho an'ny vehivavy, toy ny bikinis sexy, akanjo nentim-paharazana azo antoka, tankinis, monokinis 50s, miampy akanjo fandroana fako, sy ny sisa. Ny akanjo milomano dia natao manokana ho azy rehetra mba ahafahanao mahatoky anao kokoa ary lasa manintona kokoa. Ny ekipa Stamgon dia nanolo-tena hitondra ny mpanjifantsika traikefa amin'ny filaharana tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fanolorana ny fenitra ambony indrindra amin'ny serivisy mifototra amin'ny kalitaon'ny vokatra vokarintsika rehetra.
1.Efa afaka mampihatra logo marika amin'ny vokatra rehetra izahay, raha manana izany fangatahana izany ianao, andefaso mailaka aminay ny sarin'ny lisitry ny sary sy ny filanao, dia hodinihintsika ny vidin'ny fanaovana pirinty ary hametrahan-teny ho anao ao anatin'ny iray andro miasa.
2. afaka mamorona akanjo vaovao tahaka ny sary ataonao, santionany na sary feno tanteraka ianao.
3.Manamboatra ny haben'ny loko sy ny loko.
4. Azo ampiasaina ny fangatahana akora azo ampiasaina amin'ny fangatahana.
5. Manana ny orinasa miara-miasa izahay, afaka manome fanaterana fotoana mety.
6.Nice serivisy fanaraha-maso sy ny politikam-piverenana aorian'ny famitana ny entana.
Previous: Sahan-tsarimihetsika malemilemy maina sy malefaka moramora ny kiraro mens beach
Manaraka: Tarehimarika vita amin'ny moron-tsoavaly farafahakeliny mens, kapa amin'ny fomba malefaka, pataloha an'ny mens beach
Tariby fisaka beach
Tora-pasika Beach Beach
Fehin-kibo misy Beach mahazatra
Fitafosana ho an'ny mpihetsiketsika
Ny kalitao voalohany, ny antoka azo antoka
Akan-tsoratry ny oniversite amin'ny alàlan'ny fika maintso haingana, fomba 4 ...
Navoakan-kitapo vita pirinty haingana sy malefaka ...
Soavaly mihamaingina haingana ny birao mahamendrika ...